साप्ताहिक राशिफल : जेठ १ देखि ७ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस्
काठमाडाैं | जेठ १, २०७९
आजको दिन व्यक्तित्व सुधारको लागि चिन्तित भइनेछ । घरमा नजिकको आफन्तको आगमनले रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
तपाईले आर्थिक योजनाका कारण केही योजनाहरू स्थगित गर्नु पर्ने हुनसक्छ । आजको समयमा अनावश्यक मानिसबाट टाढा रहनु नै बेश रहला, किनकि उनीहरुले हजुरको छवि बिगार्न सक्छन् ।
हजुरको व्यवसायमा केहि समयको लागि हुँदै आएको अवरोधहरू हट्नेछ तर देशको ढिलो आर्थिक अवस्थाका कारण आत्मविश्वास खस्कनसक्छ । हजुरको व्यक्तिगत परिस्थिति अनुकूल हुनेछ, तपाईले आफ्नो कडा परिश्रमको शुभ परिणाम पाउनुहुनेछ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाई आफ्ना कुनै पनि कमजोरीहरूमाथि विजय हासिल गर्न प्रयास गर्नुहुनेछ । दिन सौभाग्यपूर्ण तरीकाले बित्नेछ ।
स्वास्थ्यमा पेट दुखाई हुन सक्छ र पाचन प्रणालीमा असुविधा बढ्न सक्छ । आज हजुरले सन्तुलित खाने र खाने तालिका बनाउने दिन हो ।आफ्नो ख्याल गर्नु होला ।
आजको समयमा कर्मप्रभुत्व हुनुले तपाईको भाग्य पनि बलियो पार्दछ । समयको उचित प्रयोग गर्नुहोस् । काममा भाग दौडको सट्टा शान्तिपूर्ण र सकारात्मक तरिकामा मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईले अवश्य पनि सफलता पाउनुहुनेछ।
सम्पत्ति खरीद र बिक्री सम्बन्धी समस्याहरू आउनेछ । कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठान घरमा गर्न सकिने दिन रहेको छ । घरमा बसे पनि बिद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययनमा पूर्ण ध्यान दिनु होला ।
कुनै पनि नकारात्मक गतिविधि पत्ता लगाउँदा बच्चाहरुप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो तर परिस्थितिलाई शान्तिमय ढंगले समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोला । घरको वरिष्ठ सदस्यको स्वास्थ्यको लागि पनि विशेष हेरचाह आवश्यक हुनु पर्नेछ ।
स्वास्थ्यमा केहि समय लागिरहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूबाट राहत पाउनुहुनेछ । औषधि भन्दा प्राकृतिक उपचारहरूमा बढी विश्वास गर्नुहोस् ।
प्रेममा श्रीमान / श्रीमती व्यस्तताको कारण एक अर्कासँग पर्याप्त मात्रामा समय दिने मौका मिल्नेछ । सम्बन्धमा अझ घनिष्टता ल्याउँछ । प्रेम सम्बन्धमा आज बलियोपन र प्रगाद हुनेछ ।
तपाईको कडा परिश्रमले सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्दछ, त्यसैले तपाईको कार्यहरू पूर्ण भक्तिसाथ गर्नुहोस् । ठुलाजन र सल्लाहकारहरूको आशीर्वाद र माया तपाईमा रहनेछ ।
कुनैप्रकारको अनिर्णयको मामलामा, काम स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ। भाई-बहिनीहरूसँगको सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ । अनौठो परिस्थितिहरूमा हजुरले आत्म-विश्वास र मनोबल सन्तुलित राख्नुहोला ।
आलुमिनियमको भाँडोमा खानु कति स्वस्थकर ?
मेष अरूलाई वचन दिने बानीले दु:ख पाइने छ । दिगो काम तथा भौतिक साधनका लागि ऋणभार समेत बढ्न सक्छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । काम गर्ने अवसर मिले पनि प्रतिफल हात पार्न नसकिएला । वृष प्रतिष्ठ...
जेठ ३०, २०७९
मेष राजनैतिक र सामाजिक कार्यमा तपाइँको झुकाव बढ्नेछ । राजनीतिक सम्पर्कहरुको लागि तपाइँको लागी केहि शुभ अवसरहरू प्रदान गर्दछ । एक नयाँ वाहनको खरीदसँग सम्बन्धित योजना हुनेछ । कुनै पनि उधारो पैसा फिर्ता पाउ...
मेष घरमा शुभ कामहरू सम्पन्न गर्न योजनाहरू बनाइनेछ । आज, दिनको अधिकांश समय खुसियाली र परिवारसंग मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । हजुर थकित र व्यस्त दिनचर्याबाट राहत पाउनुहुनेछ । आफ्नो उत्साह र ताजा महसुस गर्न...
जेठ २८, २०७९
मेष सामान्य चुनौती देखिए पनि मेहनत गर्दा लाभ मिल्नेछ । तपाईले व्यापारसँग सम्बन्धित केहि नयाँ जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ । नाफा बढाउने आशा गरिन्छ । साझेदारी सम्बन्धित कार्यमा चलिरहेको तनाव हटाइनेछ । नीत...
मेष फोन र मिडियामार्फत तपाईको साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् । यी जडानहरूले तपाईंको लागि प्रगतिको नयाँ मार्गहरू पनि खोल्न सक्छ । चलिरहेको पारिवारिक मामलाको समाधानका लागि पनि समय अनुकूल रहन्छ । व...
जेठ २१ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
मेष घरमा शुभ कामहरू सम्पन्न गर्न योजनाहरू बनाइनेछ । आज, दिनको अधिकांश समय खुसियाली र परिवारसंग मनोरन्जनमा खर्च हुनेछ । हजुर थकित र व्यस्त दिनचर्याबाट राहत पाउनुहुनेछ । आफ्नो उत्साह र ताजा महसुस गर्न...
जसपाबाट अलग हुने तयारीमा बाबुराम, प्रचण्डसँग ‘अर्थपूर्ण’ वार्ता
जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कनको काम अन्तिम चरणमा
आयोगले गर्‍यो स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा
नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रशिक्षणसहित माधव नेपालले दिए यस्तो निर्देशन
इजरायलमा लापिद नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने, बेनेटले आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने
सभापति देउवालाई रचनात्मक दबाब दिने शेखर पक्षको निष्कर्ष
नेपालमा गरीबीका कारण सनातन हिन्दू धर्मप्रति आक्रमण बढ्दैछ : कमल थापा
तरलता अभावको समयमा ठूल्ठूला लिलामी– कसरी जुट्ला लिलामी सकार्ने अर्बौं रकम ?
सूचना नदिँदा १० हजार जरिबाना
आसेपासे भर्तीमा आलेको कीर्तिमान: २३ नियुक्ति, १०१ कर्मचारी भर्ना, १२ बर्खास्त [सूचीसहित]